အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ဘာသာပြန်နိဒါန်းလျှောက်ထားရန် IMBB စီစဉ်နေ \_ t RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်IMM '' ဘာသာပြန်ချက်လက္ခဏာတွေ '' လျှောက်လွှာ၏ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
ဆိုင်းဘုတ်များခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးဖို့ IMM ကနေဘာသာပြန်ထားသောခံရဖို့ကိုလိုက်နာပါ
IMM '' ဘာသာပြန်ချက်လက္ခဏာတွေ '' လျှောက်လွှာ၏ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), မြို့ကိုလာမယ့်ခရီးသွားဧည့်များ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များအားကူညီအားအသစ်စီမံကိန်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်, အလုပ်၏အတိုင်းအတာသမိုင်းဝင်ကျွန်းဆွယ်နှင့်အနီးတဝိုက်အကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်အဖြစ်ပြင်းထန်သောနိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သို့ရောက် လာ. , ထိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်၏တစ်နှစ်ယာယီမှတ်တမ်းနှင့်အတူဆိုင်းဘုတ်တိကျတဲ့အချိန်ကပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဆွဲထားဖို့စတင်ပါပြီ။
စီမံကိန်း၏ပထမဦးဆုံးအကောင်အထည်ဖော်မှုတရုတ်နိုင်ငံ၏ 70 ။ နှစ်ပတ်လည် (တရုတ်အမျိုးသားနေ့) က 400 တထောင်ဝန်းကျင်ကနေလှည့်ခရီးသည်များအဘို့အစ္စတန်ဘူလ်တစ်အားလပ်ရက်၏အခါသမယအပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ တရုတ်သံရုံးကနေတောင်းဆိုချက်အရနှင့်အညီဖန်ဆင်းလျှောက်လွှာများ၏နယ်ပယ်; T1 နှင့် M2 ရထားလမ်းဘူတာရုံ, Bosphorus Tour / ကျွန်းများလိုင်း Piers နှင့်အတူစီးတီး Lines Ortaköyaş.'n, Kadıköy, Üsküdar / လည်ချောင်းထဲမှာ 30, İETT 11 56 ခရီးသွားဧည့်ဆိုင်းဘုတ်နှင့်အတူပုတီးနှင့်ကော်ဇောပြတိုက်အတွက်သမိုင်းဆိုင်ရာကျွန်းဆွယ်နှင့်ရရှိနိုင်အပေါ်ရပ်တန့်ဖြစ်ပါတယ် ဆိုင်းဘုတ်များတရုတ်ဘာသာပြန်ချက်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်အထွေထွေ Cui ဝေလည်းအောက်တိုဘာလ2အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Sultanahmet ရင်ပြင်မှာတွေ့ဆုံခဲ့သူနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားများနှင့်အတူတရုတ်အမျိုးသားနေ့အောက်တွင်ပရောဂျက်။ ဝေသွားရောက်လည်ပတ်သူကို IMM ခရီးသွားလုပ်ငန်းရဲတပ်ဖွဲ့အဖွဲ့သည်အစ္စတန်ဘူလ်၏တရုတ်ခရီးသွားဧည့်မေတ္တာ, အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ကပြောပါတယ်နှင့်သူတို့ဖော်ပြရန်အရေးအသားဆိုင်းဘုတ်များသူတို့ရဲ့လွယ်ကူခြင်းများအတွက်တရုတ်အားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုဒေသတွင် IMM ရဲ့အလုပ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက် Weiler မှဖူးဘုံဘာသာစကား Turkish've ဖြစ်ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် 2018 "တူရကီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတစ်နှစ်တာ" ကြေညာခဲ့ပါတယ်, ဒါကျနော်တို့နိုင်ငံမှာအစ္စတန်ဘူလ်မှတရုတ်ဧည့်သည်များအထူးသဖြင့်အလေးအနက်ရောက်လာကြုံတွေ့ခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင် IMM, တရုတ်အများအပြားဖြစ်ရပ်များနှင့်ဝိုင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့ခြင်း, IBB ခေတ်ကသမ္မတ Mevlut Uysal အစ္စတန်ဘူလ်၌တရုတ်သတင်းထောက်များနှင့်လူမှုမီဒီယာဖြစ်ရပ်ဆန်းဧည့်ခံခဲ့သည်။
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အားလပ်ရက်နှင့်အဓိကပွဲတော်များဖြုန်းဖို့စီစဉ်, စီမံကိန်းနှင့်အညီခရီးသွားလုပ်ငန်းအလားအလာ "ဘာသာပြန်ချက်လက္ခဏာများ" ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည့်အစ္စတန်ဘူလ်၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, တိုင်းပြည်နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များအဘို့အပလီကေးရှင်းကိုချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဒေတာအရ, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အာရပ်ခရီးသွားဧည့်ပိုပြီးဿွာန်နှင့်မနက်စောစောစဉ်အတွင်း Arabic အဘိဓါန်ခြင်းဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုကဲ့သို့သော, ပြင်းထန်မှု၏အီရန်ခရီးသွားဧည့်ပါရှအတွက် Nowruz အားလပ်ရက်အဖြစ် လာ. , ကရုရှားဘာသာပြန်ချက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏နယ်မြေဆိုသည့်ဆိုင်းဘုတ်များကိုအလှဆင်ဖို့အီစတာမှာခရီးသွားလာသောအထူးသဖြင့်ရုရှားအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များကို signposts ။
IMM ဒေသခံနှင့်အမျိုးသားလျှောက်လွှာဝန်ဆောင်မှု bilgiled ထုတ်ပေးခြင်းစတင် 02 / 08 / 2018 အမျိုးသားရေးအဆိုပါရထားလမ်းစနစ်ဘတ်စ်ကားစနစ်အပြီးနောက်ခရီးသည် Information "ဆိုတဲ့ bilgiled" အဖြစ်တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, တိုင်းရင်းသားနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတရာရာခိုင်နှုန်းကိုဦးဆောင်ကြောင်းစမတ်မြို့ applications များ Real-time မှာကဲ့သို့အချိန်နာရီသတင်းအချက်အလက်မှခရီးသည်စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် ISBAK ၏လက်အောက်ခံများကဖွံ့ဖြိုးပြီးအချိန်နာရီသတင်းအချက်အလက်အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ပေးအပ်ခံရဖို့စတင်ခဲ့, ထိုကဲ့သို့သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏စမှတ်မှာစောင့်ဆိုင်းမက်ထရိုနှင့်လမ်းရထားခရီးသည်သကဲ့သို့, ခရီးသည်သတင်းအချက်အလက်စနစ်နှင့်အတူ "bilgiled" ။ Bağcılar - ကျောက်ခေတ် T1 အရေအတွက်ကဓါတ်ရထားလိုင်းမျက်နှာပြင် installation ကိုဖျော်ဖြေခဲ့သည်ကိုအောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိစနစ်ရပ်တန့်ဖို့လိုင်း 70 ။ , မှန်ကန်စွာထွန်းမိနစ်လမ်းရထားထင်ဟပ်သောမျက်နှာပြင်အတွက် ...
အဆိုပါ IMM အစ္စတန်ဘူလ်မှ2150 သန်းတစ်ထောင်တန်ကတ္တရာသုံးလမ်း 12 / 07 / 2018 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ကတ္တရာလမ်းကွန်ယက်၏4တထောင်ကီလိုမီတာမှာပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်လုပ်နေတာ။ ကတ္တရာ၏တထောင်တန်ချိန်အသုံးပြုပါမည်အဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လမ်း၌ပြစ်မှားမိခံရဖို့စုစုပေါင်း 4092150 သန်းအလုပ်။ 5003လမ်းသွားလမ်းနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ဖို့လမ်းပြန်လည်ပါလိမ့်မည်ထကီလိုမီတာ။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဆိုးရွားခြင်းနှင့်အပျက်သဘောယာဉ်စီးနင်းနှစ်သိမ့်အကျိုးသက်ရောက်စေလမ်းများ tarring စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ IMM လမ်းကို Maintenance နှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံညှိနှိုင်းရေးဌာန, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အဓိကလမ်းများ၏ယေဘုယျ4အတွက်တထောင်ကီလိုမီတာရှည်လျားကွန်ယက်ကို; လေယာဉ်ပျက်ကျ, undulation (ဂယက်), ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအခြေအနေများ, ထိုကဲ့သို့သောတူးဖော်အဖြစ်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အခကျအခဲဆန့်ကျင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နယ်စပ်ကနေ Kocaeli ပြည်နယ်နယ်နိမိတ်-Tekirdag ပြည်နယ် ...
ကျောင်းဝန်ဆောင်မှု ibb ထံမှတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ရေး 21 / 09 / 2018 ကျောင်းဘတ်စ်ကားပေါ် မူတည်. အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ယာဉ်ထိန်းရဲအဖွဲ့များအနီးကပ် tools တွေကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ ပြည်နယ်အတွင်းရှိအစပျိုးသည့်စာရင်းစစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးတို့အတွက်ကျောင်းသားများထောင်ပေါင်းများစွာလွန်း 846 ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သညျ, 67 ကားမောင်းသူစံချိန်အပေါ်ထားရှိမည်။ ကျောင်းတစ်နှစ် 2018-2019 နှစ်ပေါင်းရဲ့ start နှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်နီးကပ်စွာကျောင်းဝန်ဆောင်မှုယာဉ်များနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ နေ့တိုင်းကျောင်းသားအသုံးပြုသောကျောင်းကဝန်ဆောင်မှုယာဉ်များသန်းပေါင်းများစွာတစ်ဦးချင်းထိန်းချုပ်ထားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမပေးပါဘူး။ တွဲဘက်တော်သားတာဝန်များကိုစတင်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ရဲဌာနယာဉ်ထိန်းရဲအဖွဲ့များကသမ္မတ Mevlut ယဉ်၏အမိန့်ဖြင့်ကျောင်းမှဝန်ဆောင်မှုယာဉ်များတစ်ခုစာရင်းစစ်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကျောင်းများနှင့်အိမ်များ၏ကျောင်းသားများ ...
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးက Metro လိုင်းဖျေါပွခကျြဝန်ကြီးဌာနထံမှလွှဲပြောင်း IMM 25 / 09 / 2018 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ပို့ဆောင်ရေးမီထရိုလိုင်း Sabiha Gökçenအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ဝန်ကြီးဌာန၏အပြောင်းအရွှေ့ကိုရည်မှတ်ကြေညာချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါကြေညာချက်တွင် "တစ်လိုင်းအမြန်နှုန်း၏ဆောက်လုပ်ရေးပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးစတင်ခဲ့သည်။ Kaynarca-Sabiha Gokcen က Metro ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကထွက်ယူသွားတတ်၏ဟုပြောသည်။ အဆိုပါ 2015 အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးနေဆဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပါတယ်။ Sabiha Gökçenအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှင့် IMM အားဖြင့်3များ၏လေဆိပ်မက်ထရိုအသစ်ကမြေအောက်ရထားလိုင်းကိုလေ့လာမှုများနှင့်စီမံကိန်းအလုပ်နှင့်အတူပေါင်းစည်းပါလိမ့်မည်။ ဒီမျဉ်း၏ဆောက်လုပ်ရေးမစတင်ရသေး။ လိုင်းများ Sabiha Gokcen လေဆိပ်မက်ထရိုလိုင်းထုတ်လုပ်ဝန်ကြီးဌာနကလုပ်နှင့်အသစ်နှင့်အတူပေါင်းစည်းပါလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်, လေ့လာနေ ...
ဘတ်စ်ကား-မြေအောက်ရထား ibb အကြားအခမဲ့လွှဲပြောင်းဝန်ဆောင်မှု 07 / 11 / 2018 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ဝန်ဆောင်မှုရဲ့အရည်အသွေးတိုးတက်လာဖို့နိုင်ငံသားတွေ, တဖြည်းဖြည်းစေ့စပ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးလိုင်းများအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လွှဲပြောင်းအလေ့အထများပေးနိုင်ရန်အတွက်ဘတ်စ်ကားနှင့်မြေအောက်ရထားများအကြားအခမဲ့လွှဲပြောင်းခွင့်ပြုခြင်း, ပုဂ္ဂလိကမော်တော်ကားများအသုံးပြုမှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားဖြင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အခြား Modes သာများအကြားအပြည့်အဝပေါင်းစည်းပေးနိုငျရည်ရွယ်ရှိပြီးသားနှင့်စီစဉ်ထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများကိုအခမဲ့လွှဲပြောင်းဝန်ဆောင်မှု။ အမျိုးမျိုးသောလိုင်းများအာဟာရသုတေသနပညာရှင် RESULT ထောက်ပံ့ရေးလိုင်းများခရီးသည်အပြုအမူ, ခရီးသွားလာတောင်းဆိုချက်တွေ, လယ်ပြင်၌လုပ်သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားနှင့်အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုင်းများ၏ရထားလမ်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆန်းစစ်အပေါ်ရရှိနိုင်လုပ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်။ မရပ်မနားထောက်ပံ့ရေးလိုင်းတစ်ခုတည်းလက်မှတ်စီးနင်းများအတွက်အခွန် ...
IMM ဒေသခံနှင့်အမျိုးသားလျှောက်လွှာဝန်ဆောင်မှု bilgiled ထုတ်ပေးခြင်းစတင်
အဆိုပါ IMM အစ္စတန်ဘူလ်မှ2150 သန်းတစ်ထောင်တန်ကတ္တရာသုံးလမ်း
ကျောင်းဝန်ဆောင်မှု ibb ထံမှတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ရေး
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးက Metro လိုင်းဖျေါပွခကျြဝန်ကြီးဌာနထံမှလွှဲပြောင်း IMM
ဘတ်စ်ကား-မြေအောက်ရထား ibb အကြားအခမဲ့လွှဲပြောင်းဝန်ဆောင်မှု
IMM "သင်၏အစီရင်ခံစာကဒ် Get, မှတ်ပုံတင်ရေခဲပြင်" မှ ratings လက်ဆောင်များကျောင်းသားများ
အဆိုပါ Marmaray လေ့လာရေးခရီးအနေဖြင့် IMM ဘို့အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်,
အဆိုပါ IMM ကနေမရဏ၏ 20 ။ အတွက်Barí Manco သတိရအောက်မေ့တောင်တက်
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro Inc ကအဆိုပါ IMM ငှားပြန်အမ်းတောင်းဆို